Zvikanganiso zvakawandisa pakuperetera | Zvazvino Zvinyorwa
Encarni Arcoya | | dzakawanda
Fungidzira kuti iwe wakangoita yako tangazve. Kana tsamba yekuvhara. Uchizvikudza, iwe unozvitumira kune iye munhu anoona nezve kusarudzwa nekuti iwe unofunga kuti une chimiro chavari kutsvaga. Iye munhu anoigamuchira, anoverenga resume yako uye anofadzwa. Izvo ndizvo zvavaitsvaga. Saka, ramba uchiverenga tsamba uye… unotevera meseji yekutenda iwe kubhidha asi uchiramba kukupa basa. Chii chaitika? Kazhinji, zviperengo zviperengo zvinoitwa usingazvizive, uye vanogona kuve kana kusave nebasa; kupasa kana kwete chidzidzo; kana kutopa mufananidzo wakanaka.
Mumazuva ekare, avo vainyatso kutorwa se "vanyori" vaiziva kunyora uye havana kumbobvira vaine zvisirizvo. Asi nhasi unogona kuwana mabhuku akaburitswa, pamwe nemunyori mumwe chete kana nevabudisi, ayo ane zvikanganiso zvakajairika. Uye izvi zvii? Zvakanaka nhasi tinotaura nezvevese. Nenzira iyi iwe unodzidza kusazvipira kwavari!
1 Zvakajairika Kuperetera Zvikanganiso: Usazviita!
1.1 Kuparadzanisa komma
1.2 Tilde iripi?
1.3 Chokwadi chekuti achakudzinga
1.4 Zviperengo zvekuperetera: Pamusoro pezvose / Pamusoro pezvose
1.5 Iwo parutivi iwo usingaende "kubva kuchikamu kuenda muchikamu"
1.6 Kuperetera zvikanganiso: Sei, nei, nei, nei
1.7 Zviperengo zvikanganiso: Iyo "spare" poindi mushure memubvunzo mucherechedzo kana chirevo chekushamisira
Zvakajairika Kuperetera Zvikanganiso: Usazviita!
Kunyangwe uri pabasa, bvunzo, tsamba yekuvhavha kana chero zvinyorwa zvekuzviremekedza, kana iwe usiri kuda kupa mufananidzo wakashata, haufanire kungotarisira ruzivo rwepepa, manyorerwo akanyorwa kana chinyorwa. Zvakare kuti iyi haina zviperengo.
Uye, izvo, iwe unofanirwa kuziva ndeapi akajairwa ayo anoitirwa kuitira kuti zvisaitike kwauri. Saka cherechedza.
Uku kukanganisa kwakajairika. Kunyangwe zvakajairika kuzviona mumagwaro akanyorwa neLatin America, chokwadi ndechekuti kuSpain tiri kubatawo mania, uye inofanira kubviswa sezvazvinogona. Kubva tichiri vadiki vanotidzidzisa kuti mitsara ine musoro uye chirevo. Ivo, neimwe nzira, vaviri. Uye vazhinji vanoomerera pakuvaparadzanisa nekoma.
Iropepe ye roscón de nata ndeimwe yepamusoro muSpain.
Mutsara wakanaka. Kunze kwekuparadzanisa komma inouraya iyo yese Chinhu chakarurama?
Roscón de nata recipe ndeimwe yepamusoro muSpain.
Hapana makoma. Nekuti haugone kupatsanura chidzidzo kubva pachirevhe, icho chinhu chisina kunaka.
Imwe yedzakajairika zviperengo zvikanganiso kana uchinyora ndeyekuregeredza kuti mapaseti ane maaccents Ndizvozvo. Zvakare, iwe unofanirwa kurangarira kuti zviito zvenguva yakapfuura zvinowanzo kuve mazwi akanyanya nekuti zvinopera nezwi pane izwi rekupedzisira. Uye isu tatozviziva izvo mazwi akapinza anogara aine chirevo kana achiguma mu -n, -s, kana vowel. Saka: akatarisa, akatsinzinya, ndikataura, ndakatsvoda, ndakagutsurira musoro, ndakakunda ... ivo vanozove nezwi. ZVACHOSE.
Chokwadi chekuti achakudzinga
Kunakidzwa handiti? Asi pamwe hazvisi zvakanyanya kana zvichireva kuti une basa kana kwete. Nekuti hongu, zvinoita sekunge "zvaitwa" uye "zvaitwa" zvakafanana, asi pachokwadi hazvina kudaro.
Basa rekuchikoro rakaitwa / Basa rechikoro rakaitwa
Chinhu chega chinosiyanisa mitsara miviri iyi ndi "h" (uye uya unoshayikwa kubva ku "echo"), handiti? Zvisinei, zvinoreva zvirevo zviviri zvakasiyana.
Kune rimwe divi, "Homuweki yaitwa" zvinoreva kuti wapedza basa rawaive naro, ndokuti, chechiito chekuita.
Kune rimwe divi, "Ndasuwa basa rangu rechikoro" zvinoreva kuti "warasa" basa rako rechikoro. Mune mamwe mazwi, kuti iwe "wakazvikanda" mumarara, kuti wakazvikanda ...
Sezvauri kuona, hazvireve zvakafanana. Uye zvakadaro ndeimwe yemaphutha ekuperetera akajairika.
Zviperengo zvekuperetera: Pamusoro pezvose / Pamusoro pezvose
Asati, RAE yaibvumidza iwe kupfeka jasi, nekuti rakanzwisisa kuti rinofanira kunyorwa pamwechete. Zvino, iwe unofanirwa kuzvinyora zvakasiyana. Hongu sei jasi iri rinoreva zvakafanana nejasi. Uye kana iwe ukaishandisa mumutsara, semuenzaniso:
Ini kunyanya ndinoda vanilla ...
Vanhu vanofunga kuti une jasi revanilla, asi kwete kuti iwe unoda kuratidza kuti iwe unonyanya kuda jazi revanilla.
Saka pese paunoda kuisa chero chinhu chisiri chakafanana nejasi, chinoenda chakaparadzana.
Iwo parutivi iwo usingaende "kubva kuchikamu kuenda muchikamu"
Kumwe kwekukanganisa kwezviperengo, uye muchokwadi kunoonekwa kunyangwe mune vanyori vatosimbiswa, kunyora zvakasiyana; ndiko kuti "takaparadzana." Naizvo, Kunyangwe izwi iri richireva "patsanura", chokwadi ndechekuti zvakanyorwa zvinofanirwa kuisa zvese pamwechete.
Zvino, kune mamwe "akapatsanurwa" ayo anogona kunge akapatsanurwa, asi nekuti iro izwi pacharo harireve zvakafanana neshoko rakaparadzaniswa. Aya mazwi maviri anoita ega.
Kuperetera zvikanganiso: Sei, nei, nei, nei
Hatina kunamatira, asi pane zvikonzero zvina, kana nei, kana nei. Uye imwe neimwe yakasiyana uye nekudaro mashandisiro ayo ari mune imwe nzira. Unoziva sei kuti ndeipi yekushandisa? Zvakanaka:
Nei: Inowanzo shandiswa mumitsara yekubvunzurudza, asi hazvireve kuti iwe unogara uchifanira kushandisa mamaki emubvunzo kuiisa, inogona zvakare kunge isina kunangana. Semuenzaniso: Sei usina kundidana? / Ndinoda kuziva kuti sei usina kundidana.
Nokuti: kazhinji ndiyo mhinduro kune iri pamusoro. Sei waita chinhu? Nekuti ... Izvo zvazvinoita zvine musoro mutsara unenge uchitsanangura chimwe chinhu.
Sei?: izvi zvinowanzo gara zvichiperekedzwa nechakanangana kana chisinga tsanangurike chinyorwa. Sei nei, nei ... Uye zvinorevei? Zvakanaka, unogona kuzvichinja nekuda kwe "chikonzero." Semuenzaniso: Ini handizive chikonzero chemaonero ake (ini handizive chikonzero chemaonero ake).
Nekuti: Sezvatakakuudza kare, nekuparadzaniswa uye kupatsanurwa, nei kupatsanurana uye kusingaremekedzwi kunoreva mazwi maviri akasiyana anoita zvakasiyana pane zvatinofunga.
Zviperengo zvikanganiso: Iyo "spare" poindi mushure memubvunzo mucherechedzo kana chirevo chekushamisira
Zvirokwazvo wakacherekedza izvi kanopfuura kamwe chete. Kana iwe wakazviita iwe pachako. Izvo ndezvekuisa mutongo pakati pemibvunzo kana pakati pekushamisira uye uchangobva kuavhara, isa nguva. Sezvizvi:
Iwe unoti kuchanaya kupi?
Nhai Mwari wangu, ari sei musikana !.
Zvakanaka, unozviziva iko kukanganisa kwakanyanya. Nekuti iyo chaiyo poindi yekupedzisira mubvunzo mucherechedzo uye yekupedzisira mhere inotoita senguva. Hapana chikonzero chekuisa zvimwe. Zvisinei, Rimwe rematambudziko makuru anomuka nderekuti kana, mumutsara, mucherechedzo wemubvunzo kana kushevedzera unoiswa uye unotanga nemavara makuru nekuti iyo yekutanga nzvimbo inofungidzirwa kuve yekumira kuzere. Chinhu chakadai.
Ndinozviita, asi sei ndichifanira kupfeka izvi?
Zvekare tinowana imwe yeanowanzoitika zviperengo zvikanganiso, nekuti mune ino kesi, iyo nguva ya ¿kana ya ¡hazvireve kumira kwakazara. Iyo ipfungwa isina zvimwe, hazviite zvekuti unofanirwa kuisa mavara makuru.
Saka, zvingave zviri: Hongu ndinoda, asi nei ndichifanira kupfeka izvi?
Uye ndizvozvo mashanga ekupedzisira angave ekuzvipira "vaviri mune mumwe":
Saka nyora pasi zvakanaka. Izvi HAZVIITWE.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Zvikanganiso zvakawandisa pakuperetera
Chinyorwa chikuru. Ini ndaita zvikanganiso zvakati wandei, iyo ine makoma uye yekupedzisira yenguva, ndinokutendai zvikuru nekugadziriswa.
Nyaya yemamaki ekubvunza uye mamaki ekushamisira pakati pechirevo inonakidza.Ndakaverenga mune rimwe bhuku rezviperengo kuti kuti unyore nekasi kadiki mushure memubvunzo kana chiratidzo chekushevedzera, waifanira kushandisa komma. Muenzaniso: Ini ndinoita, asi nei ndichifanira kupfeka izvo?
Ivo havafanirwe kunge vakashandisa tilde mu "hongu"? Nekuti zvinotsigirwa, kwete zvine mamiriro uye mumienzaniso yavakatipa ivo vakazvinyora vasina matauriro.